Waxgaradka Gobolka Hiiraan Oo Ka Horyimid Ammar Dhawaan Kasoo Baxay Maamulka Gobolkaasi – Goobjoog News
Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay ammar dhawaan kasoo baxay guddoomiyaha gobolkaasi, kaasi oo ku aadan in shirar siyaasadeed aanu ka warqabin maamulkaasi lagu qaban karin gobolka Hiiraan.
Nabadoon Dacar Xirsi Nuur oo ah guddoomiyaha Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa isaga oo la hadlay Goobjoog News waxa uu sheegay in marnaba aysan raali ka ahayn ammarkaasi, islamrkaana la arki doono sida uu ku dhaqan geli lahaa ammarkaasi.
Ammarkaan ayuu ku sheegay inuu yahay mid lagu doonayo in lagu caburiyo nabadoonnnada oo uu tilmaamay in maalmahan dambe ka shirayeen aayaha gobolka Hiiraan.
“Guddoomiye waxaa lagu noqdaa shacabka, waxaan ka arki doonnaa ariintaan in dowladda tahay mid diidan in shacabka si xor ah u hadlaan ama inay tahay dowlad dadka cadaadisa maalmaha soo aadan war baa soo bixi doona, waa arrin shacabka lagu caburinayo, waa la arki doonaa in shacdabka lasii caburiyo iyo in kale” ayuu yiri nabadoonka.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa ammar ku bixiyey inaan la qaban shir aysan ka war hayn maamulka gobolkaasi.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo xariga ka jaray dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga
viagra tablet rxtrustpharm.com what is the dosage for viagra...
Gphoym qgvuno [url=https://ciamedusa.com/#]generic cialis re...
debatable to heparin or; with steroids for blood cultures, d...
Fkxkba gnrhyd [url=https://ciamedusa.com/]cialis pill price...
Hi there, after reading this remarkable piece of writing i a...